Njengomthetho, umuntu ngokwakhe, ukungazi sakhe, nobuwula noma ukunganaki ingozi enkulu empilweni yabo. Futhi lapho odokotela emva eside ngokungenakulinganiswa neyinkimbinkimbi ngokungaphezulu ukwelashwa Ingase iphendule ngokungabi nasithakazelo, yena odlula ukuze Mother Nature, uzama ukuthola usizo yakhe ekuxazululeni izinkinga. Futhi ngokuvamile akawenzi amaphutha: sezindawo ewusizo zezitshalo izinto zemvelo wambeka phezu kwezinyawo zakhe. Ngakho panacea for izifo eziningi ezimbi kubhekwe wendabuko imithi Chaga amakhowe.
Ngesikhathi ukhunta, kukhona amagama amaningana. Yena a amakhowe birch ukhunta-amagciwane, futhi "impilo yenkosi." Ngamunye ngenani ezinhle iqiniso. Ngempela, ukuba uhlobo amagciwane, likhula ezihlahleni, zidla ayo zabo, nosawoti wamaminerali futhi zonke izakhi ewusizo. Kodwa ngokunembile ngenxa yaleli "yokuphila" Chaga waqaphela njengoba ehlukile ukuphulukiswa yayo izinga zalesi sihlahla. Futhi-ke yingozi birch, beech, Alder mushroom sithambile ngokuphawulekayo singabasiza abantu. Futhi obuyigugu kakhulu has birch Chaga. Kusakazeke eSiberia, Japan, China ne athile e-Asia. ESiberia bemdzabu ngekhulu le-16 (uma ukhunta kwatholakala) ukuphuza itiye ukhunta kanye infusions. Kulezi zindawo lapho libambisane ukupheka kazwelonke, cishe ziphinde zenzeke umdlavuza nezifo zesisu. Isikhathi sokuphila engaphezu kweyishumi emazingeni nezinye izifunda of Russia naseYurophu. Amasosha omzimba is uhlaliseke ngokusebenzisa chaga futhi isebenza njalo njengoba lezidlo ezinamafutha akahle clockwork. antioxidant Excellent, ke asenze umzimba okukhiphayo ubuthi chronic evimbela kumiswa amasha. Isebenza ezingeni DNA. Plus zisinikezani omningi amino acid, micro-elementi Macro ka Mendeelevskoy ithebula amavithamini. Okuningi Chaga mushroom, ukulungiswa okuyinto sizobheka ngezansi, uvikele isibindi, emaphashini, wona uthulisa isimiso sezinzwa esiyinhloko futhi ngokuvamile Ophulukisa zonke izitho. Empeleni, kuba engokwemvelo, engokwemvelo ibhekwa wezokudla, esinamandla bio-stimulator oyibamba ezingeni ezicashile kanye isekela zonke izinqubo ezibalulekile.
Usiko yokuphisa nokuphuza
Ngakho, Chaga (njengoba weld - bheka ngezansi) - Amandla wemvelo. Selani abandayo futhi kushisa, sweetening ngoju. Kunezindlela eziningana imithetho wokulungiselela isiphuzo, ukuze Ubuningi bamahora ukulondoloza zonke izimfanelo ekwelapheni. By endleleni, akukho-caffeine ezikulesi simila, ngoba ingasetshenziswa abantu abangakwazi ukuphuza itiye elivamile noma ikhofi. Uma une ukhunta ngesimo ehlukahlukene yocezu olulodwa, kuyatuseka ukuba ugaye - ngakho uthola isivuno ephakeme of izinto eziwusizo. Idlule Chaga (indlela yenza kahle -! Ufunde ngokucophelela) Ngokusebenzisa grinder inyama lube impuphu, bese uyeke uyokomisa umthombo. Labe wafaka isitsha esivaliwe aphuze njengoba kudingeka. Ngilale "phisa 'emanzini, sinake lokushisa ketshezi. Kufanele singeqi ku-55 degrees. Okunye polysaccharides, melanin, nezinye izakhi ewusizo ubhujiswe bedle amanzi abilayo. Ababukeka ukunambitheka Chaga uma phisa sifana itiye nge ngephunga ukukhanya of vanilla. 2 esithathwayo ingilazi powder itiye nezinkezo. isiphuzo Wafaka e nojeke noma ngeketela cishe imizuzu engu-15 bese elicwengekileyo. Futhi ukuwaphuza ubumnandi. By the way, nakhu kuhle mayelana Chaga. Kanjani ukuze akwenze kucace ukuthi ngempela, kodwa bambalwa abantu bazi ukuthi ottsezhenny "basaphaza" musa ukuchitha! Zingasetshenziswa ngendlela efanayo ngisho 2-5 izikhathi! Vele uma uphuza uzothola elikhanyayo, dosypte isipuni esisodwa ngaphezulu. Futhi uma isikhathi esithile etholakalayo Chaga? Indlela yenza lesi siphuzo ukuze azigcina zonke izakhiwo wayefisa, bathi, izinsuku ezingu-5 noma ngesonto? Ngomqondo onabile, inkulumo uhlelo olufanayo. Vele ugcine esiqandisini okuphuza, baphuze 1-3 izinkomishi ngosuku.
Ngo Folk imithi, waziwa iresiphi elimangalisayo tincture noma namafutha ngesisekelo ukhunta. Okungukuthi ottsezhenny yetiye powder (lisetjenziswe amahlandla 1) Ukuqoqa, emoyeni elomile uthele kule vodka. 2 amaviki ufihle ibhodlela endaweni mnyama. Khona-ke kube nzima ukumnika bese wengeza itiye njalo 1 isipuni.
Ngifisa sengathi ngabe impilo nokuphila kade!
Juice "Dzhey Seven" - umugqa flavour
Cocktail Yamamolekhula. isiphuzo Egqinsiwe ukubukeka engavamile futhi ukunambitheka
Iziphuzo carbonated - ukunambitheka ebuntwaneni
I izakhiwo itiye eliluhlaza
Yini okufanele ibe imaski ngoba snowboarding? Indlela ukukhetha imaski ngoba ukushwibeka?
Imbali hydrangea. kulinywe
Sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate - ezithakazelisayo kakhulu
20 nezihlalo endlini, lapho ungakwazi ukugcina izinto eziyigugu
Izikhonzi ubudlelwane ezweni: umqondo, ngezigaba, amalungelo nemisebenzi
"Winter Cherry" movie. Abalingisi, izindima kanye nesakhiwo sendzaba